‘उपमहानगरको प्राथमिकता पूर्णसरसफाइ र स्वच्छता हो’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘उपमहानगरको प्राथमिकता पूर्णसरसफाइ र स्वच्छता हो’
‘उपमहानगरको प्राथमिकता पूर्णसरसफाइ र स्वच्छता हो’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता June 6, 2018	0 271 Views
सन्दर्भ विश्व वातावरण दिवस
वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन समितिका संयो जक एवं वडा नं. १४ का अध्यक्ष घो राही उपमहानगरपालिका
विश्व वातावरण दिवस हिजो विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । बढ्दो मानवीय गतिविधिका कारण वातावरण प्रदूषण पनि बढिरहे को छ । जसका कारण नयाँ–नयाँ रो गहरु सिर्जना हुने र मान्छे हरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहे को अवस्था छ । विश्व वातावरण दिवस र घो राही उपमहानगरले वातावरण संरक्षण र सरसफाइमा गरे का कामका सन्दर्भमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
वातावरण संरक्षणमा के कस्ता काम के भइरहे का छन् ?
घो राही उपमहानगरपालिकाले वातावरण संरक्षणका लागि थुप्रै प्रयासहरु थाले को छ । वातावरणको कुरा हरे क गतिविधिस“ग जो डिएर आउने कुरा हो  । हरियाली, पानी, बाटो घाटो आदि कुराहरु जम्मै वातावरणसग जो डिएर आउने कुरा हुन् । यी सबै कुराको व्यवस् थापन हामीले अन्य क्षे त्रको भन्दा धे रै राम्रो गरे का छौ ं र अरु भन्दा फरक नै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागे को अवस् था छ । यहाका खो लानाला सरसफाइ अभियान हामीले चलाएका पनि छौ ं । बाटो घाटो , सार्वजनिक स् थलहरुको सरफाइ पनि चले कै छ । अहिले धे रै जसो अभियानहरुमा सम्बन्धित टो ल, वस् ती र गाउहरु आफै लाग्नु भएको छ । हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि टो ल, वस् ती र शहरहरु परिवर्तन भएका छन् । जस् तो नारायणपुरमा फो हो र जलाउने प्रवृत्ति थिया, त्यसको अन्त्य भएको छ । कागजका टुक्रा जहा“तहीं फाल्ने चलन थियो त्यो कम ह“ुदै गएको छ । थुप्रै सुधारका कामहरु भएका छन् । अझै घो राही नगरलाई थप हरियाली, वातावरणमै त्री बनाउने तर्फ हामी सबै लाग्न जरुरी छ ।
तपाइहरु आउदा अझ धे रै सुधार हुनुपनेर् हो इन र जस् तो धुलो , धुवा नियन्त्रणमा ?
हो इन हामी आइसके पछि घो राहीको धुलो नियन्त्रण गर्न धे रै हदसम्म सफल भएका छौ ं । हामीले भन्नु भन्दा पनि तपाइ“हरु आफै ले त्यो दे ख्नु भएको पनि छ । कटुवाखो लादे खि तुलसीपुर चौ राहसम्मकै बाटो कति अस् तव्यस् त थियो , धुलो धुवा“ले मानिसलाई समस् या थियो । यसको व्यापक सुधार गरिएको छ । काम अन्तिमचरणमा पुुगिसके को अवस् था छ । सडक अलपत्र छो डिदा नागरिकको तर्फबाट पटक–पटकको डे लिगे शन, ज्ञापनपत्र पनि बुझाइयो । दबाब सिर्जना गर्दा पनि काम हुन सके को अवस् था थिएन । मान्छे हरु आजित भइरहे को सन्दर्भमा हामी आइसके पछि सुधारका काम भएका छन । त्यस्तै शहीदमार्ग अन्तर्गत से नाको ब्यारे कदे खि डुम्मरगाउ“सम्मको सडकको अवस् था दयनीय थियो  । हामीले प्रयास गर्दाखे री नै यो काम अबको एकहप्ताभित्रै सकिदै छ । त्यसै ले कामै के ही भएन हो इन, धे रै काम भएका छन् । त्यो हामीले भन्नुभन्दा पनि नागरिकहरुले महसुस गरे को अवस् था छ । तर तपाइ“ले भने जस्तो जनप्रतिनिधि आउ“दा पनि के ही काम भएन भन्नु जनता र जनप्रतिनिधिबीच जबरजस् ती दूरी बढाउने काम गर्नु हो  ।
घो राहीमा त सिमे न्ट उद्यो गको प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा समस्या पारिरहे को छ नि ?
यसलाई कसरी बुझौ ं त भन्दा घो राही सिमे न्ट हामी आइसके पछि राखिएको हो इन । अहिले मान्छे हरुले हामीले ल्याएर राखिदिएजस् तो गरी प्रचार गर्नु दुःखद् हो  । हामी आइसके पछि सिमे न्ट कारखानालाई कुनै पनि संरचना विस्तारका लागि कुनै पनि चिर्कटो ले खे र दिएको अवस् था छै न । उद्यो ग, कल कारखानाहरु चल्नुपर्छ, तर विकासको नाममा जनजीविकालाई नकारात्मक प्रभाव पानेर् गरी जनतालाई आजित पानेर् गरी काम गर्न पाइ“दै न । उद्यो ग स् थापना हु“दा राज्यस“ग भएका सम्झौ ताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । कहींकतै कार्यान्वयन नभएको भए हामीले कार्यान्वयन गराउन तदारुकता दे खाउनुपर्छ । हामी त्यसतर्फ लागे का पनि छौ ं । हाम्रो प्रमुखज्यू आफै वातावरण मन्त्रालय गएर प्रदूषण मापनयन्त्रको माग गरे अनुसार अहिले रामपुरमा राखे का छौ ं । यद्यपि त्यो अझै सञ्चालनमा आइसके को छै न । त्यसबाट हामीले सिमे न्ट कारखानाले गनेर् प्रदूषणको मात्रा थाहा पाउने छौ ं र सिमे न्ट कारखानाले पनि राज्यस“ग गरिएका सम्झौ ताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है भन्ने तर्फ पुगे को छ । अझै पनि राज्यसग सिमे न्ट कारखानाले गरे का सम्झौ ता कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौ ं । वातावरण संरक्षणका लागि हामीले गनेर् काममा कुनै शंका नगर्न नगरवासीहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।
के ही नमूना टो लबाहे क अन्यत्र सरसफाइ हुन सके को दे खिदै न त ?
यो त्यति अप्ठे रो छ भन्ने मलाई लाग्दै न । सबै पूर्ण सरसफाइतिर उन्मुख हुनुभएको छ । को ही ढिलो हिड्छ, को ही चाडै हिड्छ । हामी थपक्कै बसे को भने हो इन । काम भइरहे को छ । म वातावरण तथा विपत व्यवस् थापन संयो जकको नाताले भन्ने हो भने अहिले घो राही उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा रहे का ढलहरु कहा“ जाम भएका छन् ? कहा वातावरणीय प्रदूषण छ भन्ने कुरा हे रिरहे का छौ ं । अहिले पनि १४÷१५ जनाले दै निक नाला सरसफाइको काम गरिरहे को अवस्था छ । १५÷२० वर्षसम्म जाम भएका नालाहरु सफा गरिएको छ । नगरवासीहरु उत्साहित हुनुभएको छ । १४ नम्बर वडामा नाला सरसफाइ सकिएको छ । १५ र अन्य वडामा पनि नाला सरसफाइको काम गरिरहे का छांै  । आगामी आर्थिक वर्षको बजे टको प्राथमिकतामा पूर्ण सरसफाई अभियानमा उन्मुख टो ल र वस् तीहरुलाई नै राख्ने तयारीमा हामी छौ ं । त्यहा“ एकघर एक विरुवा हुनुपर्छ र हामीस“ग सम्झौ ता गर्नुपर्छ । नगरलाई वातावरणमै त्री बनाउनका लागि सबै जनप्रतिनिधिहरु पनि लाग्नुभएको अवस् था छ । मात्रै के हो भने को छिटो हि“ड्ने , को अलि ढिलो हि“ड्ने भन्ने मात्रै हो, सबै सरसफाइ अभियानमै छौ ं ।
फो हो र व्यवस् थापनकै नमूना काम हे र्न भ्रमण गरे र आउनुभयो । अन्यत्र कसरी गरिएको छ ?
भ्रमणमा निस् िकदा फो हो रमै ला व्यवस् थापनमा हामी अन्यत्र भन्दा निकै पछाडि छौ ं कि जस् तो हामीलाई लागे को थियो  । तर भ्रमण गरे र फर्किदा अरुभन्दा धे रै माथि छौ ं हामी । हामीले काम गरे का छौ ं । अरुले प्रचार बढी गरे का रहे छन् भन्ने मलाई लागे को छ । हाम्रो स् याने टरी ल्याण्डफिल साइट छ । अन्यत्र त्यो पनि छै न । हामीले गल्ने र नगल्ने फो हो र छुट्याएर संकलन गरिरहे का छौ ं, यसमा हाम्रा नगरवासीहरुले साथ दिनुभएको छ तर अन्यत्र त्यो पनि पाइएन । अभियान र नारा व्यापक बनाइएको छ तर हाम्रो जस् तो काममा परिणत भइसके को दे खिएन । इलाममा चाहि“ एउटा नमूना काम के पाइयो भने अन्यत्र जिल्लाबाट भित्रिने गाडीहरुमा यात्रुहरुलाई पा“च मिने टजति अभिमुखीकरण गनेर् परिपाटीको विकास गरिएको रहे छ । इलाम जिल्लामा प्रवे श गर्न लाग्नुभएको मा स् वागत छ भन्ने कुरा राखे र यो जिल्लामा कतै पनि फो हो र नगरिदिनुहो ला, कागजको टुक्रा जथाभावी नफालिदिनुहो ला भन्ने पर्चा थमाइदि“दारहे छन् । जथाभावी फो हो र गरे तपाइ“लाई जरिवाना हुने छ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी दिदा रहे छन् । त्यो कुरा चाहि“ मलाई नमूना लाग्यो  । हुन त हामीले यो नीति ०७२ मंसिर ११ गते नै घो राहीको नया वसपार्कमा लागु गरिसके का छौ ं । जति पनि फो हो र व्यवस् थापनको निरीक्षण गर्न हामी पुग्यांै घो राही जस् तो अन्यत्र छै न । हामीले गरे को काम नै धे रै नमूनायो ग्य छ ।
फो हो र व्यवस्थापनको काम निजी क्षे त्रलाई दिएर अझ प्रभावकारी काम गर्न सकिदै न र ?
हो  । यसको प्रवल सम्भावना छ । त्यसकै लागि हामीले छलफल पनि अघि बढाएका छौ ं । यसका थुप्रै फाइदा पनि छन् । पहिलो कुरा त हाम्रो नगरमा बाहिरबाट आउने मान्छे हरुले फो हर नगरिदेओ स् भन्न सरकारी कर्मचारीलाई खटाउने वा हामी आफै ले पनि २४ सै घण्टा निगरानी गर्न सक्ने अवस् था छै न । किनभने हाम्रा काम गनेर् क्षे त्र धे रै छन । धे रै ठाउ“मा ध्यान लगाउदा कतै पनि भने जस्तो काम नहुन सक्छ । निजी क्षे त्रले एउटै क्षे त्रमा ध्यान लगाएर कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने दे खिन्छ । त्यसै ले हामी भन्दा निजी क्षे त्रले धे रै राम्रो काम गर्न सक्छ । उसलाई के ध्यान हुन्छ त भन्दा आज कति गल्ने फो हो र जम्मा गनेर् र बायो ग्यास उत्पादन गनेर् भन्ने ध्यान हुन्छ । अनि कति नगल्ने फो हो र जम्मा गनेर् र पुनप्र्रयो गका लागि बिक्री गरे र आम्दानी गनेर् भन्ने कुरा उसको पहिलो प्राथमिकताको विषय हुने भएकाले निजी क्षे त्रबाट राम्रो काम हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । जसले रो जगारी सिर्जनादे खि उपमहानगपालिकाको फो हर व्यवस् थापनका लागि हुने एक करो ड भन्दा बढी पै सा पनि जो गिन्छ र जनताको विकासमा लगानी हुन्छ । अन्यत्र हे र्दा कहीं कतै निजी क्षे त्रलाई दिने नाममा उल्टै स्थानीय तहलाई नै व्ययभार बढे को दे खिएका छन् भने के ही ठाउ“मा राम्रा नमूना काम पनि भएका छन् ।
अनि हरित नगरको अभियान कता हरायो ?
यो अभियान हो  । निरन्तर चलिरहन्छ । तर कहा“ पुग्यो भन्ने हो भने अहिले पनि तपाइ“हरु घो राही बजारका छतहरु हे रिदिनुभयो भने धे रै ठाउमा हरियाली दे खिन्छ । छतको हरियाली बाहिर नदे खिएको मात्रै हो  । सुन्दरताका लागि बाटो , सटहरुमा हुनुपर्छ । हाम्रो नीति के छ भने एक घर एक गमला, एक पसल एक गमला भयो भने हरियाली मात्रै हो इन, वातावरणमा समे त सहजता आउ“छ । अझ हामीले के नीति बनाएका छौ ं भने अब कुनै पनि नया“ घर बन्दा घर अघि दुईवटा बिरुवा अनिवार्य रो पे को हुनुपनेर् छ भन्ने छ । बिरुवा रो पे र आएपछि मात्रै घर बनाउने अनुमति दिने भन्ने नीतिगत व्यवस् था गरिएको छ । त्यो कहीं कतै कार्यान्वयन नभएको भए अब थप कडाइका साथ जाने मा हामी लागे का छौ ं । आउ“दो आर्थिक वर्षमा त झन हामी पूर्ण सरसफाइका लागि धे रै काम गनेर् गरी अघि बढ्ने यो जनामा छौ ं । सरकारले नै समृद्ध ने पाल सुखी ने पालीको नारा तय गरे को छ । सुखी ने पाली र समृद्ध ने पालको नारा पूरा गनेर् भने कै सरसफाइको माध्यमबाट हो  ।
शान्तिनगरमा भर्खर झाडापखालाको समस् या आयो  । फो हो र पानीकै कारण झण्डै दुई हजार नागरिक बिरामी भए । हामीले खाने पानी सफा छ कि छै न । हामीले फे नेर् श्वास स्वच्छ छ कि छै न ? हामीले खाने अन्य वस्तुहरु सफा छन् कि छै नन् भन्ने कुराको मात्रै हे क्का राख्न सकियो भने सुखी पनि भइन्छ र सुखी हुदा बित्तिकै आयआर्जनलगायतका थुप्रै गतिविधिमा संलग्न हुदा दे श आफै समृद्ध हुन्छ । बिरामी भइएन, अस्पताल नै जान परे न भने सुखी भइहालियो नि । त्यसै ले सुखी हुनका लागि पूर्ण सरसफाइतिर हामी जानै पर्छ । सरसफाइले सुन्दरता ल्याउछ । हरियाली ल्याउ“छ । व्यवस् िथत वस् ती हुन्छ र त्यसले विकास र समृद्धि ल्याउ“छ । यही कुरालाई मनन गरे र अघि बढ्न जरुरी छ । पहिलो विकास भने को आफ्नो आनीवानी बदल्ने कुरा हो  । त्यसपछि पूर्ण सरसफाइका छवटा सूचक पूरा गर्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई सुखी बनाउने छ । नाला बनाउने , बाटो खन्ने मात्रै विकास हो भन्ने मानसिकता अब सबै ले त्याग्नुपर्छ । तपाइ आफै भन्नुस् हामी रो गी भयौ ं भने कहा विकास गर्न सक्छौ ं ? हामी रो गी भयौ ं भने कहा ने तृत्व गर्न सक्छौ ं ? रो गी भए डाक्टर आफै ले पनि बिरामीको कसरी उपचार गर्न सक्छ ? त्यसै ले सबै कुरा सरसफाइ र स्वच्छ वातावरणसग जो डिएको छ । यो अभियानमा आम नागरिक तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, टो ल विकास संस् था, नागरिक समाज नलाग्दासम्म सुखी पनि हुन सकिदै न समृद्धिको कुरा त परै छ । यदि यो अभियान सबै का साझा अभियानको रुपमा उठाउन सकियो भने सुख र समृद्धि ल्याउन कुनै आइतवार पर्खिनुपदैर् न जस तो मलाई लाग्छ । हामीले बिते को एक वर्षमा पनि धे रै काम गरे का छौ ं । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले मे रो वडामा, मे रो क्षे त्रमा विद्युतको पो ल लगे र मात्रै विकास हुन्छ भन्ने हो इन, नाला बनाएर मात्रै हो इन, सडक खने र मात्रै हो इन उनीहरुको सरसफाइको अवस्था कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखियो भने अरु कुरा जतिबे ला पनि गर्न सकिन्छ ।
Previous: दाङको संस्थाले पायो वातावरण संरक्षण पुरस्कार
Next: वातावरण दिवसमा विविध कार्यक्रम